Habdhiska Dheefshiidka - Wikipedia
Meeqa ayuu uqeyb samaa
Habdhisdhiska dheefshiidku wuxuu ka koobanyahay qaybahan soo socda
1- Afka 2-Hunguriga 3-Caloosha 4-Beerka 5-Xameetida iyo Ganaca 6-Mindhicirka yar (xiidme) 7-Mindhicirka wayn(xiidme) iyo Malawadka
Xubnahana aan soo sheegnay midkasta waxuu qabataa shaqo ugaara. Habdhiska dheef shiidku waxuu ka bilaabmaa afka. Afku waxa uu inaga caawiyaa inaan cuntada calaalino. Taas oo ay ilkuhu burburiyaan ama kala furfurayasaa cuntadii oo ay u qaybiyaa qaybo yar yar. Afku waxa uu soo daaya dhareer ama candhoof sida dhareerka loo yaqaano (enzyme) ka.dhareerka ansiimku wuxuu kala daadiyaa cuntada. sidoo kale dhareerka enzyme ku wuxuu difacaya amaba ka hortgaa wixii bakteriya ah ee soo raaca cuntada. Waxay kaloo dareerku inaga caawiyaa inan cuntadii sifudud u liqno. Ka dibna contadii waynu liqaynaa iyada oo sii maraysa hun guriga.
Hugurigu waa sidii tuubo oo kale waxaanu fududaynayaa in aya cutadii hoos usii socoto. Cuntadii waxay ku dhacaysaa kiishka caloosha,ama caloosh.
Caloosha waxay leehaday muruqyo kuwaas oo kolba dhinac u wereejina cuntada. Caloosho waxay leedahay dheecaano kuwaasoo aad awuud u leh inay cuntad ay burburiyaan ama shiida,cajiimaan. waxaykoo ku soo daysaa cuntadii dheecaano kulul oo sidii (acid) oo kale ah kaaso cuntada burburinaya amaba qaybinaya. sidoo kale waxay dilaysaa bakteeriyaada (bacterial) waxay kale oo ay furfurayasa wixii nafaqada ah sida (protein) ka. intaad ka dib waxay u sii diraysaa mindhicirka yar.
Cunadu marka ay soo gaarto xiidmaha yaryar ama mindhicirka yar waxaa lagusoo daraa bile oo ah dheecaan lagusoo diyaariyo beerka laguno keydiyo xameetida. Mindhicirka yar waa halka dheef nuugh uu ka dhaco ayada oo cuntada nafaqada ku jidhay la raacinayo dhiiga halka dheef nuugu uu ka dhaco waa daldaloolyada yaryar ee loo yaqaan villi.
Haraadigii cunada marka uu soo gaaro mindhicirka weyn ama xiidmaha weyn waxaa lagala sii haraa biyaha halkaas oo haraadiga cuntada loo saaro wasaq ahaan loo yaqaan saxaro.
madhamaystirna ee lasoco intaas ayan wakhti u helay
waan soo dhamaystiri doo insha alaah
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Habdhiska_Dheefshiidka&oldid=228069"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Jannaayo 2022, marka ee eheed 21:16.